Izitayile zasehlotyeni: iilokhwe ezinde ezisikwe kancinci | IBezzia
UMaria vazquez | 19/07/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
Kukho iimpahla eziba ngamadlelane amakhulu ngexesha lasehlotyeni kwaye iilokhwe esizicebisayo namhlanje ziphakathi kwazo. Bazi iilokhwe ezincinci ezincinci, Ngoyilo apho kungekho nto itsala ingqalelo engaphezulu kwipateni uqobo kunye nelaphu elenziwe ngalo.
Kolu hlobo lwelokhwe awuyi kufumana izinto ezihamba phambili onokuyifumana kwezinye ezinje ngemikhono ekhukhumeleyo, iruffles okanye ukusika macala. Nangona kunjalo, enkosi kwimitya yabo ebhityileyo kunye neepateni zabo eziqhelekileyo, ezi zinxibo ziya kukubonelela ngeyona ntuthuzelo iphezulu.
Nokuba zithini na iindlela zeli xesha, iilokhwe ezinde ezinqunqwe encinci zihlala zifumana indlela yazo yokuqokelela imfashini ehlotyeni. Lula Ngaphandle kwamathandabuzo, luphawu olusenza sibathande kakhulu.
Ukulula kweepateni zayo ibenza isiqwenga esingapheliyo apho sinokujika unyaka nonyaka ngaphandle koloyiko lokudinwa. Ukuba, ukongeza, sibheja kuyilo ngemibala engathathi hlangothi: mhlophe, ecru, beige okanye mnyama ... sinokufumana okuninzi kubo ngokudlala ngezixhobo.
En umqhaphu, ilinen, i-viscose okanye i-knight elula… Iilokhwe zoluhlobo zenziwe kuluhlu olubanzi lwamalaphu. Ezi zenziwe nge-tino zezona zintsha, kodwa zishwabene ngakumbi kunalezo zenziwe ngamanye amalaphu. Ukuba ayisiyongxaki kuwe, njengoko ingeyiyo eyam, zezona zikhetho zibalaseleyo zokujongana neyona mihla ishushu.
Ukudibanisa ilokhwe kunye nokusika okuncinci njengalesi siyicebisayo namhlanje kulula kakhulu. Into ekufuneka uyenzile kukongeza ezinye iimbadada ezisicaba, ingxowa onokuyixhoma egxalabeni ukuze ufumane intuthuzelo enkulu, kunye nomnqwazi kunye / okanye iiglasi ezikukhusela elangeni.
Imifanekiso - @lungelos, @iamfanlalisa, @lisonseb, @yekelyo, @iamfanlalisa, @iamfanlalisa, @kwivuyile, @loveyotya, @youkwang
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Izitayile zasehlotyeni: iilokhwe ezinde ezisikwe kancinci